Niknayman: မိုင် ၃၀၀၀ ကျော် လမ်းလျှောက်နေသူ ငြိမ်းချမ်းရေးသံတမာန်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း။
မိုင် ၃၀၀၀ ကျော် လမ်းလျှောက်နေသူ ငြိမ်းချမ်းရေးသံတမာန်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း။
မြန်မာနိူင်ငံ ၏ လွတ်လပ်ရေး နှင့် လွတ်မြောက်ရေး အတွက် သင့်လက်မှတ် ကလေးများမစကြပါ။ သင် မလျှောက်နိူင်သော..မိုင် ၃၀၀၀ ခရီး ကို..သတ္တိရှိသူများ သင့် အစား လျှောက်နေကြပါသည်။ လူကြီးမင်းများ လက်ခူတ်တီးရုံဖြင့် မလုံလောက်ပါ။
သင့် ဆိုင်း သာ ထိုးပေးပါရှင့်
မိုင် ၃၀၀၀ကျော်ခြေလျှင်ရှောက်နေသော ငြိမ်းချမ်းရေး၏ သံတမာန်များကို..တတ်အားသ၍ ထောက်ခံ အားပေးကြ့ပါရန်...ဒီနေရာသို့ ကြွပါရှင်
source:http://thadar.blogspot.com/2008/03/blog-post_23.html အားတင်ပြပေးထားပါသည်။ ကူညီ ကြပါ ခင်ဗျာ။
Posted by အာဇာနည် at 4:28 PM
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာရတနာသုံးပါးကို ရိုသေမြတ်နိုး လက်စုံမိ်ုး၍ ရှိခိုးပူဇော်ပါ၏။
Niknayman's Challenge Box to SPDC
ဘုန်းဘုန်းချမှ လုံးလုံးရမယ် သံချပ် download
အပိုင်း (၁) http://www.mediafire.com/?2dzaxw1jyfmအပိုင်း (၂) http://www.mediafire.com/?vymnusdm0do
ညီညွတ်ခြင်း ဆောင်းပါးများ၏ PDF file download
ဒီမှာ ယူပါ http://www.mediafire.com/?nde1ny5jjbd
Connection ကောင်းလား..မကောင်းဘူးလား. Video ကြည့်ချင်..သလား.. သတင်း စာဘဲဖတ်နှင့် မလား
ပီနန်ဆရာတော်၏ မိန့် ကြားတော်မူသောတရား( နာဂိုရာ)
C Box News (English Version)
ဆရာတော် များ၏ “တရားတော်” များ
(1) သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ ၏ “ဧကရာဇ်မင်းကြီးရဲ့ ဘ၀နိဂုံး” တရားတော်။ (2) သီတဂူဆရာတော် ၏ “ရာဇောဝါဒ (ဝေဿန္တရာ)” တရားတော်။ (3) သီတဂူဆရာတော် ၏ “ရာဇောဝါဒ (ပေါရိသာဒ)” တရားတော်။ (4) သီတဂူဆရာတော်ကြီးရဲ့လိပ်ကလေးလိုနေ တရားတော် (5) အရှင်ဦးကောဝိဒ ၏ “အဆိုးဆုံးရောဂါကို ကုစားပါ” တရားတော်။ (6) သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူတဲ့ လူမိုက်တို့ သွားရာလမ်း။
တို့ မေတ္တာစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။ လူအချင်းချင်းနှိပ်စက်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ။
NO FREEDOM IN BURMA
Burma Dictator Watch
သားသုံးသားရှင်းလင်းရေးလှို့ ဝှက်စီမံ ချက်အသံဖိုင်
I made this music playlist at MyFlashFetish.com.
ဒီမှာတော်လှန်ရေးသီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ်။ ဒီသီချင်းကို အစအဆုံးနားထောင်ပေးပါ။ တော်လှန်ရေးသီချင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြညိတွင်းကလူများ အိမ်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာ ကျယ်ကျယ်လေး ဖွင့်ပါလို့ ။ အခုနေချိန် လူတိုင်းဖွင့် ကြဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီမှာ download လုပ်ပါ။ http://www.mediafire.com/?3qxx52tuxdu
ဘုရား တရား သံဃာကို စော်ကားသူ ခောတ်သစ် မာရ်နတ် သုံးဦး။
မင်းသိင်္ခ၏ ၁၉၈၈ခုနှစ်ကာလအတွင်းက ဟောပြောမှု
သတင်းစုံလင်..သိချင်ရင် BBC News Burma Today Democratic Voice of Burma Irrawaddy Magazine Hittaing khitpyaing Journal Mizzima News Moemaka. Radio Myanmar Bloggers Thitsa Yoma VOA Radio Free Asia U Than Shwe Blog You Can Wish for Daw Aung San Suu Kyi
ဒီမှာ..ဖွင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်..ခင်ဗျာ.... နယ်ခြားမဲ့မြန်မာဘလော့ဂါများ ကိုကဒေါင်းညင်သာ ကို ကလိုစေးထူး ကိုဈန်.. ကိုဇင် ကိုတက်စလာ ကိုတီဇီအေ ကိုထိုက် ကိုပုထုစဉ် ကိုပေါ ကိုဖိုးဇေ ကိုမိုးတိမ် ကိုရင် ကိုသင့်ကင်း ခင်မင်းဇော် ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ (မြိတ်) ဆုံစည်းရာ ဇော်ဘားမား ညလေး ဘယ်ညာညီညီလှမ်း..ပန်းတိုင်လမ်းသို့ပြည်သူ့ ရန်စွယ်များ ဘုန်းဘုန်း လူသစ် မသဒ္ဓါ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အစည်းအရုံး မျိုးဆက်အမှတ် (၅) မေငြိမ်း မင်းမင်း ၉၆ မျိုးဆက်များ လင်းလက်ကြယ်စင် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ သမိုင်းထဲကရက်စွဲများ သီရိလင်္ကာရောက်သံဃာတော်များ အရှင်မေတ္တာစာရ အမိမြန်မာပြည်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာများ အိမ်မက်အိမ်ကလေး
/* EOT ----------------------------------------- */